Odisha Tours Odisha | Hlola i-Flora ne-Fauna-993.702.7574
Uhambo olusendle lwe-Wild Odisha kunye ne-Sandpebbles - Amava amnandi ngendalo, i-Flaura kunye ne-Fauna ka-Odisha.
Ukukhangela inqwelo-mpahla yangempela? I-Odisha yeeNdwendwe kwi-Wildlife iyona ndawo ekugqibeleni ukuya kuyo!
Nangona iilwandle kunye neetempile zithatha ikhaya le-baton ngenxa yokuthandwa kwabo, i-Odlife Tours Odisha iyamangalisa ukuba namava. Ngeqela leepaki, i-tiger, kunye neendawo zokuhlala zasendle, urhulumente uye wanyusa iintlobo zezilwanyana kunye neentyatyambo ezingenakufumana kwenye indawo emhlabeni. Yibani ihlathi leMangrove kunye neNxweme yeBhitarkanika okanye amahlathi aseCandaka, yonke i-nook ne-cranny kwimimandla yasempuma ye-Indian ibandakanya iindawo zasendle ezizityebi.
Kwi-Odisha yakho yeeNdwendwe , ufumana ithuba lokubona izilwanyana zihamba zijikeleze kwindawo yokuhlala yazo, ziphulaphule izandi zazo kwaye zive ukuba intliziyo yakho ivuke ngokuvuya. Apha, unokubona ubungqina beemvelo ezihlukahlukeneyo ezibandakanya i-tiger, indlovu, ingwenya, inambuzane, i-jackal, kunye nezinye ezininzi kwindawo yokuhlala.
Ikhefu lethu leeNdwendwe zeeNdwendwe e-Odisha lilungelelaniswa neminqweno yakho kwaye inike ithuba lokubona okusemgangathweni kwezilwanyana zasendle ezifunekayo kurhulumente.
ISUKU 01: Ukufika kweBhubaneswar
Ukufika kwi-Bhubaneswar Airport / Isitishi seSitishi kunye nokuthunyelwa kwihotele. Ngomso emva kokuhlwaya kwithempeli laseLingaraj, iKhandagiri Udayagiri Jain Caves. Kusihlwa ngokuhlwa kwi-Ekamra Haat Dinner kunye nobusuku obuninzi eBhubaneswar.
USUKU 02: IBhubaneswar - uSatkosia
Emva kwesidlo sakusihlwa uye eSatkosia ngeAngul. Thatha uhambo lwenqanawa e-Satkosia Gorge apho unokufumana khona u-Mugger noGharial enxweme. Ngomso emva kokuhamba ngeendlela zendalo. Isidlo kunye nobusuku eSatkosia.
USUKU 03: USatkosia - iBhitarkanika
Emva kokutyelela kwasekuseni Bhitarkanika. Khangela ukungena kwiItleferenethi yethu .Ngemva kwekhefu eliqhelekileyo lokuhamba kwidlo sasemini ukuya eKalibhanja Diha Island kwisikhunjana semimandla esasigunyaziwe yiSebe leWorlife, ukuba ujonge i-panoramic site yeRamsar. Ngobusuku ba tyelele itempile yaseJagannath ukuba bathathe inxaxheba kwi-Live Aalati Darshan. Ebusuku, ujabulele umlilo we-camp with Snacks and Dinner. Ngobusuku ku-Sand Pebbles Jungle Resorts.
USUKU 04: Bhitarkanika
Emva kwesidlo sakusasa sakusasa sasekhaya, tyelela kwi-Bird engcwele, uhamba ukuya kwindawo yokuzingela yaseKumkani waseKumkani, uhambo oluya kwiinqanawa ezahlukahlukeneyo ezisemaphandleni ekuvunyelwene yiSebe le-Wildlife, ukuba ubone iinqwenya. Emva kwexesha lesidlo ukuya kwiimyuziyam kunye neprojekthi. Ngokuhlwa kusivuyela umlilo wekampu kunye nokutya kunye neDinner. Ngobusuku IiNtshontsho zeNxweme zeJungle Resorts.
USUKU 05: Bhitarkanika - Similipal
Emva kwesidlo sakusasa sakusasa sakusasa kwiSimilipal Tiger Reserve. Ukungena kwihotele. Emva kokuhamba kwemini yokuhamba kunye nokufundiswa kwendalo kwindlovu yemfuyo, tyelela kwiplasi yokuzalisa iCroco. Ukutya isidlo kunye nobusuku eSimilipal.
USUKU 06: Similipal
USUKU 07: Similipal - Ukuhamba
Emva kokuhamba kwesidlo sasekuseni ukuhamba phambili